हिमालयन बैंकको नाफा साढे ४४ प्रतिशतले घट्यो, अन्य सूचक के कस्तो ? – BUSINESSPANA.COM
हिमालयन बैंकको नाफा साढे ४४ प्रतिशतले घट्यो, अन्य सूचक के कस्तो ?
काठमाडौं- हिमालयन बैंकको खुद नाफा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म करिब साढे ४४ प्रतिशतले घटेको छ ।
बैंकको खुख नाफा चालु आवको चैत मसान्तसम्म आँउदा ४४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । चैत मसान्तसम्म खुद नाफा घटेर १ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यस्तै, वितरण योग्य नाफा पनि ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । खुद ब्याज आम्दानी २९.४५ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ३९.०८ प्रतिशतले घटेका छन् । बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी भने विस्तार गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा दुवै घटेपछि खुद मुनाफा पनि संकुचन भएको हो ।
प्रतिशेयर आम्दानी पनि १६ रुपैयाँ ९० पैसाले घटेर १६ रुपैयाँ ६ पैसामा सीमित भएको छ । हिमालयन बैंकको खुद नाफा घटेपनि विगतका २ वटा त्रैमासको तुलनामा भने नाफा कमाउने क्षमतामा वृद्धि भएको बैंक व्यवस्थापनले जानाएको छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अत्याधिक उपस्थितिका कारण प्रतिस्पर्धा बढ्नुलाई प्रमुख समस्या र चुनौतीका रुपमा बैंकले ठहर गरेको छ ।
Previous: लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन बन्द
Next: नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिलो पटक एन आई सी एशियाको ‘Quick Pay’ सेवा सार्वजनिक !